स्वस्तिमाको बेग्लै बाटो - मनोरञ्जन - नेपाल
स्वस्तिमा खड्का | तस्बिरहरु : श्रुति श्रेष्ठ
डेब्यु फिल्म होस्टेल रिटर्न्सबाट सम्भावना बोकेकी अभिनेत्रीमा दरिइन्, स्वस्तिमा खड्का । सुन्दरतासँगै अभिनयले दर्शक मोहित भए । नयाँ फिल्मबाट भटाभट प्रस्ताव आउन थाले । त्यही बेला स्वस्तिमाले 'बोल्ड' निर्णय गरिन्, निर्देशक/अभिनेता निश्चल बस्नेतको दुलही बन्ने । प्रायः हिरोइन करिअरबाट किनारा लागेपछि बिहे रोज्छन् । सफलता चुमिरहँदा बिहे गर्नेहरु पनि छन् । तर धेरैजसो त्यसपछि हराउँछन् । त्यसैले नजिकका शुभचिन्तकले स्वस्तिमालाई बिहे नगर्न सुझाए । 'करिअर सकिन्छ' भन्ने भय देखाए ।
त्यतिबेला २० वर्ष पुग्दै थिइन् । हतारिनुपर्ने केही थिएन । तर माया बसेपछि कसको के लाग्छ ? स्वस्तिमाले बिहे गरिछाडिन् । ती पल सम्झँदै भन्छिन्, "मलाई आफ्नो अभिनय क्षमता र लगावमा विश्वास थियो । त्यसैले बिहे बाधक बन्दैन भन्नेमा निश्चिन्त थिएँ ।" आखिर भयो पनि त्यस्तै । स्वस्तिमा अभिनीत लगभग आधा दर्जन सिनेमा प्रदर्शन भए । अधिकांशबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइन् । र, यतिबेला बुलबुलबाट चर्चाको अग्रभागमा छिन् । उनकै शब्दमा, बुलबुलले नसोचेको सुखानुभूति गराएको छ । हो पनि, यो फिल्म हेरेकाहरु रणकला बनेकी स्वस्तिमाको अभिनयबाट फिदा भए ।
"बुलुबल मेरा लागि पाठशाला बन्यो," उनी भन्छिन्, "अरुले पैसा दिएर अभिनय सिक्छन् । मैले पैसा लिएर अभिनय सिक्न पाएँ, बुलबुलमा ।"
जति समृद्ध र आधुनिक भएको भनिए पनि हिरोइनको भूमिका 'सो-पिस' मा सीमित फिल्मको बाहुल्य छ हामीकहाँ । महिला कलाकार पनि हत्तपत्त चरित्रमा चुनौती मोल्न चाहँदैनन् । पर्दामा चिरिच्याट्ट देखिन पाउँदैमा दंग पर्छन् । निर्माता/निर्देशकमा महिला चरित्र प्रभावी हुनुपर्छ भन्ने चेत अझ पलाएको छैन । स्वस्तिमा स्वयं यसअगाडि हिरोइनको परम्परागत भूमिकाभन्दा उतिविघ्न माथि उठ्न सकेकी थिइनन् । तर बुलबुलमा यावत मानक तोडिन् । पहिलो कुरा- टेम्पो चालक, अझ बच्चाकी आमाको भूमिका स्वीकार्नु नै साहस थियो । तर यही चुनौतीपूर्ण चरित्रलाई जीवन्त बनाएर उनले अभिनेत्रीका रुपमा आफ्नो क्षमताको नयाँ क्षितिज उघारेकी छन् । "बुलुबल मेरा लागि पाठशाला बन्यो," उनी भन्छिन्, "अरुले पैसा दिएर अभिनय सिक्छन् । मैले पैसा लिएर अभिनय सिक्न पाएँ, बुलबुलमा ।"
जब यसका लेखक/निर्देशक विनोद पौडेललाई भेटिन्, स्वस्तिमाको अभिनयप्रतिको दृष्टिकोण नै बदलियो । चरित्रलाई आफ्नो ढंगले आत्मसात् गर्न सिकिन् । भन्छिन्, "यसअगाडि निर्देशकले जे भन्यो, त्यही मात्र गर्नुपथ्र्यो तर चरित्रको परिधिभित्र रहेर मैले गरेका काममा विनोद सरले छूट दिनुभयो र त्यसलाई अझ निखार्नुभयो ।" निर्देशकले यस्तो माहोल तयार गर्दा चरित्रप्रतिको उत्तरदायित्व अरु बढ्ने अनुभव सुनाइन् । अगाडि थप्छिन्, "२३ वर्षकै उमेरमा यति परिपक्व चरित्रमा आफूलाई ढाल्न पाएँ । यसमै खुसी छु । राम्रो/नराम्रो छुट्याउने जिम्मा त दर्शककै हो ।" फिल्ममेकर क्षमतावान नहुँदा स्तरीय पटकथामा निम्नकोटिको फिल्म बनेको स्वस्तिमा आफैँले देखे/भोगेकी छन् । त्यसैले पटकथाभन्दा फिल्ममेकर चयनमा चनाखो हुन्थिन् । बुलबुलबाट यो शिक्षा अझ सघन भयो ।
स्वस्तिमा सामान्य परिवारमा हुर्किन् । फिल्म उद्योगमा उनले चिनेजानेका कोही थिएनन् । बुबा, अंकलहरु सबै आर्मीमा । उनलाई चाहिँ बच्चैदेखि हिरोइन बन्ने हुटहुटी तर कसैलाई भन्न सक्दिनथिन् । किन ? उनी मुस्कुराइन्, "हिरोइन बन्छुभन्दा अरुले खिसी गर्छन् भन्ने डर लाग्थ्यो । त्यसैले मनको कुरा मनमै राख्थेँ ।" फिल्म उद्योगको चमकधमकले उनमा हाउगुजी पैदा गर्यो । त्यसमाथि उनी परिन् बिल्कुलै 'आउटसाइडर' । त्यसैले फिल्ममा छिर्न महामुस्किल हुन्छ, मौका पाइन्न भन्ने संशयबाट ग्रसित थिइन् । तर भइदियो ठ्याक्कै उल्टो । उनलाई लाग्छ, फिल्म खेल्न संघर्ष गर्नैपरेन ।
एसएलसीपछि मिस टिन नेपालको प्रतिस्पर्धी बनिन् । उत्कृष्ट पाँचसम्म पुगिन् । फोटोसुट गरेर सामाजिक सन्जालमा अपलोड गरिन् । म्युजिक भिडियो खेल्न प्रस्ताव आउन थाले । दुई भिडियो गर्नासाथ निर्माता सुनील रावलले होस्टेल रिटर्न्समा अफर गरे । "सबै छिटो-छिटो भयो । मलाई हिरोइन नै बन्नु थियो तर सुनील सरलाई फ्याट्टै हुन्छ भन्न सकिनँ," उनी ढाँट्दिनन्, "फिल्म खेल्न आँट आइसकेको थिइन । सिक्न धेरै बाँकी थियो ।" तर होस्टेल रिटर्न्सको कार्यशालामा सहभागी भएपछि आत्मविश्वास बढ्दै गयो । थिएटर पृष्ठभूमिका सोही फिल्मका अन्य कलाकार नाजीर हुसैन, प्रदीपकुमार चौधरी, रोयदीप श्रेष्ठहरुको सान्निध्य थप फलदायी भइदियो ।
लभ लभ लभबाहेक स्वस्तिमा अभिनीत छक्का-पञ्जा २, नाई नभन्नु ल ५ र जय भोले हिट भए । ब्लकबस्टर छक्का-पञ्जा ३ मा पनि उनलाई देख्न पाइन्छ । दुई रुपैयाँ फिल्मको 'कुटुमा कुटु...' उनले कम्मर मर्काएको पहिलो गीत । यसैले युट्युबमा ९ करोड ६० लाख भ्युज बटुलेर नयाँ रेकर्ड राखेको छ । म्युजिक भिडियोमा उत्तिकै क्रेज छ । पहिलो महिनामै तीन-चार म्युजिक भिडियो खेल्थिन् । फिल्ममा व्यस्ततासँगै असाध्यै 'चुजी' हुन थालेकी छन् । जताततै देखिँदा दर्शक झुक्किन्छन् र झिँजो मान्छन् भन्ने भय, जो छ ।
स्वस्तिमा फुरुंग यसकारण पनि छिन् कि फिल्म खेल्न न पतिको अवरोध छ, न त परिवारको । फिल्म छान्ने पूर्ण अधिकार उनकै हुन्छ । बुलबुलकै हकमा पनि अनुबन्ध भएको धेरै समयपछि मात्र निश्चलले थाहा पाएका थिए । भन्छिन्, "घरमा हामीबीच फिल्मको उतिविघ्न गफ हुन्न । कहिलेकाहीँ सरसल्लाह हुन्छ, एकअर्काको कामबारे कमेन्ट गर्छौं । यत्ति हो ।" बुलबुल रिलिजअगावै हजार जुनीसम्मको सुटिङ भ्याएकी थिइन् । अहिले मनग्ये फिल्मबाट अफर आइरहेका छन् । तर स्वस्तिमालाई हतारो छैन ।
धेरै होइन, स्तरीय काम गर्नु छ उनलाई । कोहीसँग प्रतिस्पर्धा छैन, छ त केवल आफैँसँग । प्रचुर आत्मविश्वासले भरिएकी छन् । भनिन्छ, हिरोइनको आयु छोटो हुन्छ, उमेर घर्कंदै गएपछि किनारा लाग्छन् । यस्तै भएको देखिन्छ पनि । स्वस्तिमालाई डर लाग्दैन ? उनले थोरै गम्भीर मुद्रामा सुनाइन्, "लाग्दैन । उमेरसँगै जीवन भोगाइ बढ्छ । अभिनयमा थप निखार आउँछ/ल्याउन सकिन्छ । मेरो व्यक्तिगत अनुभवले यही भन्छ । रुपमै अल्झने हो भने त अलग कुरा ।